China medical alahlwayo ubuso buso ifektri abakhiqizi | Limeng
Izinto zokusetshenziswa zemaski yokuhlinzwa elahlwayo inikezwa ngamafektri wemikhiqizo yendabuko, ekhiqiza izinto zokwelapha zesikhathi eside, futhi ikhwalithi iqinisekisiwe. Futhi, iziqu ezifanele zezinto zihlangabezana nezinga lokuphathwa kohlelo lwe-EN14683. Ikakhulukazi, impahla emaphakathi incibilikisiwe ishaywa ngamagremu angama-25 ngemitha eyisikwele futhi i-BFE (iBacterial Filtration Efficiency) ingama-99% ngenhla, enikezwa yiSinopec, ebizwa ngokuthi ukuncibilika okuhle okushaywe eChina. Isifihla-buso sobuso sinobuso obuthambile nobuntofontofo obungaphakathi obunezinhlavu zekhala eziguquguqukayo kanye neluphu yendlebe enwebekayo ukuze ilingane kahle. Kukhona ukumelana okuphansi kokuphefumula. Isifihla-buso sokuhlinzwa sibuye sihlolwe futhi sinikezwe umbiko wokuhlolwa ngokumelene nama-aerosols ezinhlayiyana.
Usayizi 17.5cm * 9.5cm
Ukuphikiswa Komoya <49Pa / cm²
Ukusebenza kokuhlunga kwamagciwane > 95% wezinhlayiya ezithwalwa umoya eziyi-0.3micron
Indlebe iluphu Donsa Amandla 10N / 10s
Ekwindla nasebusika yisikhathi lapho amagciwane okuphefumula esebenza kakhulu. Ungakhohlwa ukugcina imaskhi yakho kuwe ngaso sonke isikhathi, ngoba ingavimba ama-virus angama-95%.
Ukutheleleka kweNovel Coronavirus kubucayi kakhulu kulo nyaka. Kuphela uma ngamunye wethu enokuqonda nokuzikhuza ukwenza umsebenzi omuhle wokuzivikela, ukugeza izandla njalo, ukuvunguza umoya njalo, ukugcina ibanga lomphakathi nokukwenza kube umkhuba wansuku zonke nokuziphatha kwezempilo okuqonda lapho singagwema khona ukutheleleka okuvela kwinoveli yeCoronavirus.
Nakani ukugqoka amaski
1. Geza izandla ngaphambi kokugqoka imaski nangemva kokuyikhipha.
2. Uma ugqoke imaski, naka ngaphambili nangemuva, umboze ikhala nomlomo, bese ulungisa isiqeshana sempumulo silingane nobuso.
3. Gwema ukuthinta imask ngaphakathi nangaphandle ngezandla zakho ngesikhathi ugqoke. Susa imaski ngokususa intambo emaphethelweni womabili.
4. Ukugqoka izifihla-buso eziningi akukukhulisi ngempumelelo umphumela wokuvikela, kepha kwandisa ukumelana nokuphefumula futhi kungaqeda ukuqina.
5. Izinyathelo ezahlukahlukene njengokuhlanza nokubulala amagciwane kwezimaski azikwazi ukuqinisekisa ukusebenza kwamamaski.
6. Izimaski zezokwelapha ezilahlwayo nezimaski zokuhlinza zizosetshenziswa kuphela isikhathi esilinganiselwe futhi azingeqi emahoreni ayi-8 esewonke.Abasebenzi bokuchayeka emsebenzini abafanele ukusebenzisa amaski ngaphezu kwamahora ama-4. Akufanele zisetshenziswe kabusha.
Olandelayo: Ibhande le-earloop nokunwebeka okulahlwayo
3 Ply Face Imaski
3 Ply Kuhlinzwa Face Imaski
Alahlwayo Earloop Face Vuvu
Alahlwayo Kuhlinzwa Face Imaski
Ukulahlwa Kobuso Buso
Isihlungi Sezokwelapha Indwangu Yokuncibilikisa Ebusweni
Isihlungi Sezokwelapha Indwangu Yokuncibilikisa Ephephuzwayo